Niyad-jabkii aan kala kulmay Madaxweyne Farmaajo [W/Q: Ridwaan Xaaji C/weli] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Niyad-jabkii aan kala kulmay Madaxweyne Farmaajo [W/Q: Ridwaan Xaaji C/weli]
Marka hore waad salaaman tihiin,
Waxaan jeclahay in aan idinla wadaago qormadan yar oo aan doonayo in aan dadka la qaybsado si ay aragti uga qaataan dhibaatada nagu habsatay isla markaana aau wax uga qabbano. Waxaan si gaar ah uga hadlayaa waxa aan la kulmay maanta oo dad badan ay la kulmaan isla markaana kamid ah waxyaabaha igu abuuri jirray Niyad-jabka muddadiii aan ka shaqaynayay Soomaaliya.
Maanta oo jimca ah waxaan la balansanaa Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si aan Waraysi muuqaal ah uga qaado. Balanta waxaa naloo qabtay dhowr maalmood ka hor.
9:30 am ama aroornimo ayaan imid Hotelka uu daganyahay madaxweynaha si aan u hubiyo in xiliga balanta aanan ka dib dhicin oo ku beegneyd 10: 00 am, Shakhsiyanna waxaan ku dadaalaa ilaalinta balamaha iyo waqtiga.
Si wanaagsan ayey iisoo dhoweeyeen xubnaha xafiiska warbaahinta markii aan Hotelka tagay,waana uga mahadcelinayaa. Waxaa ila socday filim-qaade lagu magacaabo John Spier oo waraysiga duubayey, waxaa nala fadhiisiiyay qol ay dhowr qof ku jiraan si aan u suguno madaxweynaha, waxaa markiiba noo yimid madaxweynaha oo u muuqday qof ku faraxsan in aan u nimid isla noo sheegay in uu diyaar u yahay waraysi uu bixiyo. Waxaa uu naga codsaday in aan yara sugno si uu u dhamaysto balammo uu la lahaa dad kale oo u imanayay.
Ku dhowaad labo saacadood kadib markii ay kasoo wareegtay xiligii balanta ayaan la hadlay Cabbdinuur Maxamed oo ah madaxa warfaafinta ee Villa Somalia, anigoo la yaaban dadka faraha badan ee tubanaa albaabka qolka uu dagan yahay Madaxweyne Farmaajo, marar badan ayaan usoo joogay xaaladaha noocan oo kale ah.
Afhayeenkii hore ee xukuumadda Soomaaliya, weriye u shaqeeya VOA-da laanta Afsoomaaliga Ridwaan Xaaji
Cabdunuur oo ah nin aan siixiibo nahay oo run badan waxaa uu ii sheegay in wali balantu ay sideeda tahay, waana uga mahad celiyay anigoo og in wax walba ay isbadali karaan maadaama balamaha , maamullka iyo hab-maamuuska dalkeenu uu wali dhutinayo.
Anigoo la yaaban wali buuqa iyo dadka la isku wada dul-balamiyay ayaan u sheegay Film-qaade John in aan ka cabsi qabo in aanu suuragalin waraysiga. Waxaa uu I weydiiyay sabab? Waxaan ku jawaabay, waxaan filayaa in madaxweynaha uu mashquul badan galay, waxaa uu markale I weydiiyay maxaa ku dhacay balantii ? Waxaa ugu jawaabay aan waqti kale ugu darno.
Markii la gaaray 12:30 am ayaa nin kamid ah Hab-maamuuska madaxweynaha noo sheegay in madaxweynuhu safrayo 1:00 PM isla markaana saacadahaan ay dhib ku yihiin in uu ka jawaabo su’aalaha. Waxaan weydiiyay ma madaxweynaha miyaa sidaas kugu yiri? Waxaa uu yiri haa wallaahi.
Waxaan kadib taleefan u diray Cabdinuur oo markaas iga yara fogaa waxaan la wadaagay farriinta anigoo u raaciyay haddii waraysigu uusan suuragal ahayn waxba dhib malahan ee aan iska baxno, kadibna waxaa uu ii sheegay in aan sugo oo waqti loo helayo waraysiga.
Wax yar kadib ayaan ka warhelnay in madaxweyne Farmaajo uu ka noqday waraysiga anigoo markii horaba ka warhayay in Madaxweynuhu uusan jeclayn waraysiyada iyo Khudbadaha la jeediyo si lamid ah qaar badan oo kamid ah madaxda dunida, laakiin waxaan la yaabay ayaa ah balan-qaadka aan runta ahayn iyo nidaam-daradda na haysta oo aan ka warhayo in aan muddo kusii jiri doono haddii aan wax laga badalin dhaqanka noocan ah.
Anigoo aad u niyad-jabsan ayaan la kulmay gabar muddo sadex maalin ahayd sugaysay in ay la kulanto madaxweynaha si ay sawir ula gasho iyadoo sidada warqad ay ku qoran tahay mid kamid ah ururada ku howlanaa gurmadka abaaraha, hase yeeshee waxaa uu madaxweynaha u sheegay in uusan xiligan diyaar u ahayn sawir uu galo oo uu dib ugu soo laaban doono London. Gabdhaas oo aan ka cudur-daaranayo magaceeda waxaa ay ii sheegtay in ay ururiyeen lacag dhan 100’000 oo dollar si loogu caawiyo abaaraha.
Todobaadkii hore waxaa qorshaha noogu jirtay in aan waraysanno Ra’iiusl Wasaaraha Britain, Theresa May hase yeeshee waaxda warfaafinta ayaa noo sheegay in ay ka cudur-daaratay Waraysi ay bixiso, waana wax uu qofku xaq u leeyahay iyadoo waliba warbaahinta dalkan ay aad ugu dhaliilaan Ra’iisul Wasaaraha in aysan jeclayn waraysiyada, hadana waxaa wax lagu farxa ah in aaney qofkna waqti uga luminayn balan qaad aan jirin iyada iyo shaqaaleheeda.
Waxaan kusoo gunaanadayaa hadalkayga in loo baahan yahay in aan casharro ka bararrno dhamaan sidii aanu uga gudbi lahayn jahawareerka anagoo gac-maha is haysanna si aanu waqti badan nooga lumin.
Waxaan shaki ku jirin in haddii balamaha iyo waqtiga aan ilaalin weyno ama aan dhaqan ka dhiganno wax aan run ku dhisnayn in aanan si sahlan wax uga qaban Karin dhibaatooyinka amniga, dhaqaalaha, iyo dib-u-dhiska hay’adaha dawladeed.
Qoraalkani ma ahan mid aan ku mucaaradayo shakhsi ama adawladda, aniga ayuuna gaar ii yahay. Wariyahuna waxa uu la yaabo waa iska caadi in uu la wadaago dadkiisa.
Waxaan u mahadcelinayaa Cabdinuur Maxamed, Cabdiraxmaan Caynte iyo Abuukar Baale oo dhammaantood waqti galiyay in waraysigan uu suuragalo.
SOOMAALIYA HA NOOLAATO!!
Doorashada January 19, 2022
Wakiilka Q/Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa kulan la yeeshay guddoomiyihii hore ee Barlamaanka Federaalka Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari). War kasoo baxay xafiiska UNSOM...
Caalamka January 19, 2022
Xildhibaanka u dhashay dalka Ingiriiska ee Gavin Williamson ayaa muran badan ka dhaliyey Baraha bulshada, kadib markii uu mooshin geeyay Baarlamaanka Ingiriiska, kaasoo lagu...
Waxaa maanta magaalada Baydhaba lagu doortay shan xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka. Kursiga koowaad oo ahaa HOP184 waxaa ku tartamay Wasiir Xasan Cabdinuur...
Qof si sharaf dhac ah looga ceyriyay dowladdiisa iinuu faafiyey xogta Amniga Qaranka ma aha inuu ka ganacsado faragelinta arrimaha gudaha Qaran kale. Wasiirka Qorsheynta...
Jeneraal Abuukar Warsame Xuud ayaa maanta ka degay magaalada Muqdisho, isagoo la socdo Taliyaha ciidmada Dhulka Jen. Maxamed Tahliil Biixi, waxaana garoonka loogu diyaariyey...
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada xukuumadda xilgaarsiinta Durraan Axmed Faarax ayaa qeylo-dhaan kasoo saaray kursiga beeshiisa oo uu sheegay in si sharci darro ah...
Somali January 19, 2022
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalintii ku usgan dalka Itoobiya ayaa la geeyay isaga iyo weftigiisa magaalada Hawassa ee dawlad deegaanka Sidama. Muuse Biixi...
XOG: Farmaajo oo Heshiis hoose la gelaya Jeneral Xuud & Kursigii uu sharaxnaa Fahad Yaasiin oo..
EXCLUSIVE Doorashada January 18, 2022
Waxaa magaalada Beledweyne ka socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo uu wado Taliyaha ciidamada Dhulka Jen. Maxamed Tahliil Biixi, kaasoo xal loogu helayo gadoodka uu waday...